Akusiyo imfihlo ukuthi amasaladi amaningi engeza amakhowe, fresh, okuthosiwe noma zicwiliswe. Ngokwezinga elithile lokhu kubangelwa, sibonga ukunambitheka kanye nephunga elimnandi amakhowe izitsha babe nogqozi lobuqambi bezinto ekhethekile. Ukuze wenze isaladi nge amakhowe zifakwe emanzini anosawoti, ezikhathini eziningi kuthatha isikhathi esiningi nokuzikhandla, kodwa umphumela ungaba umxhwele kakhulu.
Ukuze uqale, kuyafaneleka ukukhumbula a ezicashile ezimbalwa ezibalulekile. Ngaphambi ekulungiseleleni isaladi nge amakhowe ekheniwe, yena nabo bonke abantu ketshezi zabo ukuthi akhishwe wageza. Uma kukhona usawoti omningi noma uviniga, kutuswa ukuba ubilise imizuzu embalwa bona (isikhathi eside kakhulu Akubalulekile ubilise, njengoba bangaba kanzima).
Kunezindlela eziningana lapho isaladi nge amakhowe zifakwe emanzini anosawoti. Ngakho, kuzothatha amazambane abilisiwe, nophiso amakhowe, amagremu 100 of ushizi, ukhukhamba, u-anyanisi, amaqanda 2 abilisiwe. Amakhowe uzilungiselele, ukusika (uma kudingeka) ku izingcezu ezincane. Anyanisi usike futhi kancane ethosiwe. Zonke ezinye izithako uthathe cubes, wafaka endishini isaladi elixutshwe kahle. Lokhu isaladi begqoke nge imayonnaise. Nokho, abantu ukubala kilojoule, uphelele isaladi, lapho esikhundleni imayonnaise sigqoka kuyoba emafutheni zemifino kanye esincane kalamula. Hlobisa isidlo kungenziwa lisikiwe noma oqoshiwe iminqumo oluhlaza izindandatho.
Abathandi ukudla angapheka inyama isaladi nge amakhowe futhi inkukhu. Ngenxa yale njongo, nophiso amakhowe zifakwe emanzini anosawoti uzodinga 250 amagremu inkukhu, ushizi, isigamu tin ka peas oluhlaza. Inkukhu abilisiwe yahlukaniswa fibre. ushizi shredded in a blender noma grater, ukusika amakhowe. Ngo izitsha okulungiselelwe aliveza izithako uhlanganise. Ungagcwalisa isidlo nge ukhilimu omuncu ne ukwengeza inani elincane horseradish yashizi. Futhi, ukunambitheka sengezwe usawoti kanye nesiqholo.
Ukunambitheka yasekuqaleni kuyodingeka isaladi nge amakhowe enososo futhi cranberry. Ngaye, kubalulekile ukuthatha 200 amagremu amajikijolo fresh, amazambane abilisiwe amakhowe (amakhowe engcono noma amakhowe), amakhambi. Bahlanza cranberry zibekwe isidlo ezijulile, liyanezela amakhowe, amazambane, Diced, dill oqoshiwe futhi chives. Zonke begqoke nge imayonnaise. Kufanele sikhumbule ukuthi ede bona ijame lokhu isaladi is hhayi Kunconywa, njengoba ijusi yama berry kungaletha. Kungcono ukuba asilungise ngaphambi nje kokuqala iholide.
Futhi ukunambitheka ezithakazelisayo kuyodingeka isaladi okulungiselelwe iresiphi elandelayo. Izithako ezidingekayo ukuthatha amakhowe, ngabhema inkukhu webele, abanye amaqanda abilisiwe, nophiso imayonnaise lecho. Lecho asuswe pepper bese efakwa colander beka ngayo utamatisi ke uthathe yizicucu amancane. amaqanda abilisiwe wagcoba on a grater ophansi. Inkukhu kanye amakhowe uthathe cubes. Njengoba yenziwe isicaba, isidlo ebanzi, izithako okuyiwona zizofakwa ku izingqimba. Zazihambisa amakhowe, phezu kwabo inyama. Ngakusasa ungqimba intando pepper, okuyinto wabeka amaqanda. Ezigcotshwe phezu isaladi nge imayonnaise washiya amahora ambalwa in the esiqandisini. Uma wayefisa izingqimba angakwazi siphindwe ukulandelana efanayo.
Ngaphezu inyama nemifino, amakhowe ehlangana kahle ukunambitha izinhlanzi kanye izilwane zasolwandle. Ngokwesibonelo, omunye sikulungisele isaladi tuna zase zifakwa emanzini kwalokho isikhunta. Kuze kube yimanje, i-tuna (okusemathinini kungcono ukuthatha) iyasikwa ibe cubes, kanye amakhowe. Lokhu ukungezwa irayisi abilisiwe, amaqanda oqoshiwe asikiwe iminqumo izindandatho. Izingxenye ngokuphelele kuxutshwe isaladi, begqoke nge sauce garlic, ehlotshiswe imifino. Salad kancane enosawoti futhi bafafazwe kalamula.
Akubuzwa, isaladi nge amakhowe zifakwe emanzini anosawoti, ezithinta izithako letengetiwe ke futhi siyoba umthamo omuhle kakhulu futhi isidlo eqotho etafuleni iholide.
Cafe Inethiwekhi "Kebab House" (Petersburg): incazelo, imenyu kanye nokubuyekeza
Ukushoda Vitamin kubangela yamathambo: C noma D?